Ahoana ny fomba fanamboarana backup feno an'ny PC-nao ary hamadihana azy ho cd-live | Avy amin'ny Linux
Efa nandray ny kapila mafy nataonao tamin'ny hafa ve ianao PC? Sa tsy nahatratra ny seho nataonao tamin'ny masinin ny namanao ianao? Aza adino ny mitondra kapila mafy ao anaty kitapo. Androany no hilazako aminao ny fomba niova fo tu rafitra ankehitriny ao amin'ny live-usb/ cd mora ary amin'ny dingana 4 fotsiny.
@pandacriss dia iray amin'ireo mpandresy amin'ny fifaninanana isan-kerinandro: «Mizarà izay fantatrao momba ny Linux«. Miarahaba anao!
1.- Alohan'ny hametrahana ireo programa rehetra ilainay amin'ny masininay (na amin'ny milina virtoaly) aloha: ny fonosana amin'ny fiteny, kaody audio sy video sns; Manamboatra ny birao, ny hitsin-dàlana fitendry, ny mpandefa ary izay rehetra eritreretintsika izahay; Esorinay ny mpamily tompony (na doka ho an'ny vahiny) hialana amin'ny olana ary mihazakazaka amin'ny masinina tena samy hafa
2.- Ary hametraka izahay izao RemasterSys. Ity fitaovana ity dia hamorona cd mivantana an'ny rafitray. Misy fitaovana hafa mitovy amin'izany fa ity dia tena mety amiko.
Ao amin'ny Ubuntu dia apetraka toy izao:
Manokatra terminal ho ROOT sy paste izahay:
wget -O - http://www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.key | apt-key manampy -
Avy eo ampianay amin'ny source.list ny iray amin'ireo repository ireo:
Mametaka eo am-pamaranana ny tsipika mifanaraka amin'ny kinova izahay:
deb http://www.remastersys.com/ubuntu lucid main deb http://www.remastersys.com/ubuntu maverick main deb http://www.remastersys.com/ubuntu natty main deb http: //www.remastersys .com / ubuntu oneiric main deb http://www.remastersys.com/ubuntu tena marina
Avy eo ny klasika ...
fanavaozana apt-get && apt-get remastersys hametraka
3.- Manaraka izany dia hamorona sary .iso, livecd anay izahay.
sudo manasitrana backup myCustomLinux.iso
Ny parameter backup dia handika ny atiny an-trano ihany koa, ao anatin'izany ny fikirana amin'ny programa, ny tantaran'ny fizahana, ny rakitra manokana, sns. Manoro hevitra aho ny hanadio ireo fampahalalana rehetra ireo raha azo atao satria ny rakitra vokariny dia tsy tokony mihoatra ny 4GB. Tsy maninona na te hampiasa izany amin'ny usb na dvd 9gb ianao. Hita ny fanazavana momba an'io olana io eto.
Na dia manery be loatra ny angon-drakitra aza ny remastersys, dia mety tsy ho afaka na hanafoana ny fanangonana rakitra "midadasika" misy anao ianao. Amin'izay dia ampiasao ny dist parameter:
Karazana fanapariahana ofisialy no hoforonina saingy misy programa bebe kokoa ary tsy misy fikirana na data manokana.
Haharitra elaela izany ary hahatonga ny processeur anao ho lasa adala, mandehana mihodina. Rehefa vita dia ho hitanao fa namorona fampirimana mpampiasa izay misy, ankoatry ny zavatra hafa, ny sary handoro:
4.- Saika vonona. Izany no ampahany sarotra, na dia (araka ny hita amin'ny sary etsy ambony) aza azo ampiasaina ny interface graphique. Ankehitriny dia mila mandoro "MyPersonalizedLinux.iso" amin'ny DVD fotsiny ianao. Azonao atao ny mampiasa brazier na k3b.
LIVE-USB: raha efa namorona live-usb ianao dia tsy ho fantatrao izay hatao izao. Toy izany koa, ho fanampiana azonao atao ny mijery ilay lahatsoratra ny fomba famoronana usb mivantana mampiasa Unetbootin.
5.- Farany, mamporisika anao aho hametraka fitaovana sasany izay afaka hanavotra anao amin'ny vonjy taitra:
lohalaharana: mamerina rakitra voafafa
ny suite voafafa azo antoka: handrava ireo rakitra izay tsy tokony hisy hahita
test-disk: hamerenana ireo fizara very (olana windowsero mahazatra: voafafa ny latabatra fizarazarana ary manome ny fiheverana fa "voafafa ilay disk").
clanav: antivirus ho an'ny linux (hamafana ireo virus amin'ny rafitra hafa)
Gparted, macchanger, aircrack, nmap, tor ... ary maro hafa.
Fanamarihana: ny baiko "# remastersys clean" dia manadio ireo rakitra namboarina "/ home / remastersys" nandritra ny famoronana iso. Noho izany antony izany dia asaina mihazakazaka alohan'ny hamoronana iso vaovao na hanafoanana ny habaka kapila.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fomba fanamboarana backup feno an'ny PC-nao ary hamadihana azy ho cd-live
Ricardo Bird dia hoy izy:
@ Andao hampiasa Linux efa hitako io 😀
Sir Co $ t Granda dia hoy izy:
Ary ahoana no fomba hanaovako ilay .iso tsy noforonina tao an-trano? satria izay tohana dia tsy mifanaraka amin'ny kapila ary tiako ho voarakitra amin'ny hafa izany: / ary napetrako ny làlana fa tsy misy, mitazona azy ao / home / xxx
Valiny tamin'i Sir Co $ t Granda
Miquel Mayol i Tur dia hoy izy:
Manoro hevitra ny LiveISO ny fonosana Multisystem ao amin'ny Ubuntu aho ary nalaina tamin'ny alàlan'ny interface graphique misy fiteny maro sy MULTIBOOT - mitovy kely kokoa na kely kokoa noho ireo baiko nohazavaina tamin'ny prendrivelinux - fa tsy Unetbootin, na dia YUMI avy amin'ny MS WOS aza.
Valiny tamin'i Miquel Mayol i Tur
Fa io fitaovana io ve mbola azo ampiasaina ??? Tamin'ny fotoana nidirako farany tao amin'ny tranonkalan'ny mpanoratra dia nilaza izy fa hampitsahatra ny fivelaran'ny fitaovana io.
Toa marina ny anao ... leo ny mpamorona lehibe ... iza no mahalala izay nitranga ...
10 volana ity lahatsoratra ity ka mety lany andro io.
Gazety TuxInfo # 53 misy